မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ဖူးကြောင်း အထောက်အထား ရှိရုံဖြင့် ဘင်္ဂါလီများကို ပြန်လည် လက်ခံသွာ - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ဖူးကြောင်း အထောက်အထား ရှိရုံဖြင့် ဘင်္ဂါလီများကို ပြန်လည် လက်ခံသွာ
မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်စရာ မလိုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ဖူးကြောင်း အ ထောက်အထားရှိရုံဖြင့် ဘင်္ဂါလီများကိုပြန်လည် လက်ခံသွားမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ပြောသည်။ ပြန်လည်လက်ခံရာတွင်လည်း ရခိုင်ပြည် နယ်အတွင်း မူဆလင်ကွန်မြူနတီအဖြစ်သတ် မှတ်ပြီးလက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၁၉ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ NRPC တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့် ဆွေက ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့မှာ ဖြည့်စွက်ရမယ့်ပုံစံရှိပါ တယ်။ ဘယ်သူရယ် ဘယ်ဝါရယ်ဆိုပြီးတော့ လက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီမှာ သူကြိုက်တာ သူဖြည့်၊ ကျွန်တော်တို့က သဘောတူထားတာက ဘာသဘောတူထားလဲဆိုတော့ ဒီနိုင်ငံမှာနေခဲ့ ဖူးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ ဒီနိုင်ငံသား ဖြစ်စရာမလိုဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာနေခဲ့ဖူးတဲ့ အထောက်အထားရှိတယ်ဆို ရင် လက်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ခုန တုန်းကလို ဘင်္ဂါလီလို့ခေါ်တာ ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တာ ဆိုတာက စိတ်ဝမ်းကွဲစေတဲ့ကိစ္စကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က အဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကို ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ မူဆလင်ကွန်မြူနတီကလူ တွေလို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်။ ကျွန်တော် တို့လက်ခံမှာက ရခိုင်မှာရှိတဲ့ မူဆလင်ကွန် မြူနတီလို့ပဲလက်ခံမှာပါ”ဟု ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ပြောသည်။
သို့သော် လက်ရှိတွင် ပြန်လည်လက် ခံရေးသည် မြန်မာဘက်မှ နှစ်နိုင်ငံသဘော တူညီချက်နှင့်အညီ ပေးပို့ထားသည့်ပုံစံများ အတိုင်း ပြန်လည်ပေးပို့လာပါက Census အချက်အလက်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး မည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုသို့ပေးပို့လာခြင်း မရှိသလို Camp များတွင်လည်း မြန်မာ ဘက်မှပေးပို့ထားသည့် ဖောင်ပုံစံနှင့် အ ချက်အလက်များကို (နေရပ်ပြန်လိုသော် လည်း)မသိရှိကြသဖြင့် ပြန်ရန်ခက်ခဲကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ဆက်လက်ဆိုသည်။ ”ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြန်ဝင်လာတဲ့ မိသားစုငါးယောက်ဆိုရင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ က လွယ်လွယ်ကူကူလာလို့မရပါဘူး။ ည ကြီးမှာ ခိုးပြီးတော့လာရပါတယ်။ ခိုးလာ ပြီးတော့ ပြန်လည်လက်ခံရေးစင်တာကို သွားပါတယ်။ ပြန်လည်လက်ခံရေးစင်တာ က ဖြည့်စွက်ရမယ့်ပုံစံဖောင်တွေကို ဖြည့် ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သိရပါ တယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော် တင့်ဆွေက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ Camp များတွင် မိမိကိုယ်ကိုယ်မူဆလင်ဟု ဝန်ခံအသိအ မှတ်ပြုကာ နေရပ်ပြန်လိုသူများစွာရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့၏ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ဘာသာပေါင်းစုံချစ် ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အ ဖြစ်လိုက်ပါခဲ့သူ ဦးသိန်းလွင်က ပြောသည်။ ” Camp တွေမှာ တော်တော်များများ မြန်မာစကားပြောတတ်ပြီး ပြန်ချင်တဲ့ လက္ခဏာတွေ့ရတယ်။ သူတို့ရွာတွေကို သူတို့ပြန်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါက Camp တွေမှာတွေ့ရတာပေါ့။ သို့ပေမဲ့ နောက်စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ တွေ့ဖို့ခေါ်ပေးထားတဲ့ ဒုက္ခသည်အယောက် ၅ဝ လောက်မှာဆိုရင် လေး၊ ငါးယောက် လောက်ပဲ မြန်မာစကားပြောတတ်တယ်။ ကျန်တာတွေအကုန်လုံးက စကားပြန်နဲ့ ပြောရတယ်။ တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတော်များများ ကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မူဆလင်ပါ ဘင်္ဂါလီပါလို့လက်ခံတယ်။ အဲဒီထဲက တချို့ကတော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောဆိုတာမျိုး ကို တမင်ထည့်ပြောနေသလိုပဲ”ဟု ဦးသိန်း လွင်က ပြောသည်။ အစိုးရအနေနဲ့ ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ ပြန်ခေါ်လိုသောဆန္ဒရှိသည်ကိုယုံကြည် ခြင်းကြောင့် ¤င်းအနေဖြင့် ယင်းခရီးစဉ် ကိုလိုက်ပါခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးသိန်းလွင် က ပြောသည်။
ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး၏ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသရန် သဘောတူညီမ?
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပျက်ယွင်းနေသည့် ဆေးရုံများ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး အပါအဝင် အချက်ကိုးချက်ကို
မြန်နှုန်းမြင့် စူပါကွန်ပျူတာကို ဗြိတိန် တည်ဆောက်မည်
အာဖရိကတိုက်၏ ပထမဦးဆုံးသော အမျိုးသမီးသမ္မတကို နိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ပွဲ အတွင်းမှ ကယ်ထုတ်ပေးခ?
VW ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု အပုပ်နံ့ သတင်းကြောင့် Porsche က ဒီဇယ်ကား ထုတ်လုပ်မှု ရပ်ဆိုင်း